विचित्र संसार Archives • Nepal's Trusted Digital Newspaperविचित्र संसार Archives • Nepal's Trusted Digital Newspaper
२३ चैत, ०७८, बुधबार । तद्नुसार अप्रिल ६, २०२२ । चैतशुक्लपक्ष पञ्चमी, बालब करण, रोहिणी नक्षत्र, आयुष्मान योग, चन्द्रमा वृष राशिमा रहेको छ । आज मध्याह्न ११ः४२ देखि १२ः३२ सम्म अभिजित मुहूर्त रहेको छ । बुधबारको दिन गृहस्थसम्बन्धी कार्य गर्दा शुभ मानिन्छ । आज बिहान सूर्योदय ५ः५१मा हुनेछ भने १८ः२३ मा सूर्यास्त । आजको देवता चन्द्र […]
काठमाडौँ — विश्वमै पहिलो पटक प्रत्यारोपणमार्फत सुँगुरको मुटु प्राप्त गरेका अमेरिकी नागरिक डेभिड बेनेटको मृत्यु भएको छ । सुँगुरको मुटु प्रत्यारोपणमार्फत प्राप्त गरेको दुई महिनापछि उनको मंगलबार अमेरिकाको मेरिल्यान्डस्थित अस्पतालमा मृत्यु भएको हो । मेरिल्यान्ड विश्वविद्यालय, बाल्टिमोर अस्पतालले जारी गरेको वक्तव्यअनुसार केही दिनदेखि बेनेटको स्वास्थ्य अवस्था खस्किएको थियो । अस्पतालले बेनेटको मृत्युको ठोस कारण भने सार्वजनिक गरेको छैन । […]
युके, युकेमा एक महिलाले करिब अढाइ लाख रुपैयाँमा आइफोन १३ प्रो म्याक्स अनलाईनबाट किनेकी थिइन्, तर उनलाई पठइदिएको प्याकेटमा भने एउटा साबुन थियो। रिपोर्टका अनुसार खाउला लाफैली नामकी एक महिलाले अनलाइन सपिङ साइटबाट आइफोन १३ प्रो म्याक्स बुक गरेकी थिइन्। दुई दिनपछि कुरियर गर्ने केटाले उसलाई प्याकेट ल्याइदिए। खोलेर हेर्दा उनी छक्क परिन्। वास्तवमा त्यो प्याकेटमा […]
दक्षिण अफ्रिकाबाट आएको एउटा मालवाहक विमानको पाङ्ग्रा भएको भागमा लुकेर बसेका एक व्यक्तिलाई डच प्रहरीले एम्स्टर्ड्यामस्थित स्किपोल विमानस्थलमा जीवितै फेला पारेको छ। सामान्यतया जोह्यानिस्बर्गबाट एम्स्टर्ड्यामको उडानका लागि ११ घण्टा लाग्छ। दक्षिण अफ्रिकाको उक्त सहरबाट उडेको कार्गो विमान केन्याको राजधानी नाइरोबीमा एक पटक रोकिएको थियो। आकाशमा निकै माथि पुगेपछि अक्सिजनको मात्रा तथा तापक्रम घट्ने हुँदा सास […]
आज ११ जनवरी । आज विश्व इतिहासमा विभिन्न सामाजिक तथा राजनीतिक घटनाक्रम विकसित भएका थिए । प्रस्तुत छ इतिहासमा आज भएका केही घटनाः पेरुमा विध्वशंकारी पहिरो सन् १९६२ मा पेरुमा गएको ठूलो पहिरोमा परेर चार हजार जनाको मृत्यु भएको थियो । ढुंगा र हिउँले भरिएको १२ मिटर अग्लो पर्खाल भत्किँदा रियो सान्ता उपत्यकामा नौ ओटा […]
काठमाडौं। स्विट्जरल्याण्ड सरकारले सुसाइड मेसिनको प्रयोगलाई कानुनी मान्यता दिएको छ । यो मेसिन बनाउने कम्पनीको दावीअनुसार यो मेसिनले कुनै पनि व्यक्तिलाई १ मिनेटभित्र कुनै पीडाबिना मृत्यु दिन सक्छ । यो मेसिन कफिनको आकारको छ । यो मेसिनको माध्यमबाट अक्सिजन लेभल अत्याधिक कम गरिन्छ जसका कारण एक मिनेटभित्र मृत्यु हुन्छ । एक्जिट इन्टरनेशनल नामको संस्थाका निर्देशक […]
काठमाडौँ । कहिलेकाहीँ जनावर र पशुपंक्षीले देखाउने ब्यबहार दुरुस्तै मिल्न जान्छन् । जनावर र पंक्षीले दुरुस्तै मानिसको जस्तो दृश्य देखाउँदा कस्लाई पो हाँसो उट्ठैन र ? यस्तै दृश्य अहिले ट्वीटरमा भाइरल बनिरहेको छ । जहाँ एउटा चराको भिडियो अहिले निकै चर्चामा छ । केवल १० सेकेण्डको यस भिडियो झट्ट हेर्दा कुल्ला ९गारगल० गरे जसरी कुल्ला […]
काठमाडौं । ७१ वटा बा रुद सु रुङ र बि स्फोट हुन बाँकी युद्ध सामग्रीबारे पत्ता लगाएको विश्व चर्चित मुसा मागावा ले अवकाश पाएको छ । खबर हो कम्बोडियाको । त्यहाँको बारुदको सुरुङ सुँघ्ने काम गर्ने मागावा नामको ‘हिरो मुसा’ ले अवकाश पाएको अन्तराष्ट्रिय समाचार एजेन्सीहरुले उल्लेख गरेका छन् । भर्खरै सात वर्ष पुगेको यो […]
महिलालाई एउटा बच्चा जन्माउन त कति मुश्किल पर्छ एकैपटक १० बच्चा जन्माउदा कस्तो होला भन्ने कल्पना गर्न नि गाह्रो हुन्छ । तर दक्षिण अफ्रिकामा यस्तै घटना बाहिर आएको छ । दक्षिण अफ्रिकामा ३७ वर्षीया एक महिलाले एकैपटक १० वटा बच्चालाई जन्म दिएकी छन्। दक्षिण अफ्रिकाको राजधानी प्रिटोरियाको एक अस्पतालमा गोसियम थमारा सिथोल नाम गरेकी महिलाले […]
केवल १९ रुपैयाँमा घर आउँछ भन्दा कसले पत्याउला ? अपत्यारिलो यो खबर हो क्रोएसियाको । क्रोएसियाको लेग्राड नामक शहरमा अहिलेसम्म १९ श्रपैयाँमा १७ वटा घर बिक्रि भइसकेका छन् । अन्तराष्ट्रिय समाचार एजेन्सीहरुका अनुसार केवल २ हजार २५० जना मात्रै मानिसहरु रहेको उक्त शहर लेग्राड ६२ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा फैलिएको छ । शहरको जनघनत्व कम नहोस् […]